BAARLAMAANKA OO LAGU
GANACSIGA EE AY
SOOMAALIDU KU LEEDAHAY
Tan iyo markii uu soo baxay go'aankii taariikhiga ahaa ee uu baarlamaanka Soomaaliya 17 kii bishaan ku hor istaagay in ciidamada Xabashida la keeno dalka, waxaa soo badanaysay taageerada ay soomaalida ku nool gobolada dalka Maraykanku u hayaan xubnaha baarlamaanka gaar ahaan godoomiye Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee degen Waqooyiga America ayay somaalidu ku leeyihiin goobo ganacsi oo kala duwan sida makhaayado, bacadlayaasha dharka, dukaamo lagu gado cuntada xalaasha ah sida hilibka, xarumaha xawilaadaha, goobo lagu duubo cajaladaha iyo meherado kale oo kala duwan.
Marka aad soo gashid inta badan rugahaa ganacsiga ee aan kor ku soo sheegnay waxa ugu horeeya ee ay ishaadu ku dhacayso waa sawirka gudoomiya baarlamaanka soomaaliya mudane Shariif Xasan. Dad badan ayaa sheegay in ay jeclaan lahaayeen in ay helaan dhamaan sawirada xubnaha baarlamaanka si ay u soo daabacaan. Waxaa kale oo jirta dhalinyaro ka mid ah ardayda wax ka barata jaamcadaha gobolka oo qorshaynaya in ay soo saaraan qoraalo iyo farshaxano kala duwan sida funaanado ay ku sawiranyihiin gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa.
Sidoo kale magaalooyinka Columbus iyo Atlanta oo ka kala tirsan gobolada Ohio iyo Georgia oo ah laba meelood oo ay Soomaalidu ku leeyihiin ganacsi balaaran ayaad ka dareemaysaa taageerada xoogan ee looga hayo baarlamaanka iyo gudoomiyihiisa.
Dad taageersan madaxweyne c/llaahi Yuusuf oo arintaa ka ficil qaadanaya ayaa iyaguna soo daabacay sawirka madaxweynaha si loo garab suro kan gudoomiyaha baarlamaanka inkasta oo ay ganacsato badani arintaa diideen hadana waxaad arkaysaa meelo ay labada sawir is garab suranyihiin.